Hiran State - News: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in shir dib u heshiisiineed loo qabto DKMG ah iyo Xarrakada Al-shabaab
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in shir dib u heshiisiineed loo qabto DKMG ah iyo Xarrakada Al-shabaab
Egypt: (Hiranstate.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/qaadim Salaad Xasan ayaa ku baaqay in dalka gudihiisa lagu qabto shir dib u heshiisiineed oo lagu dhexdhexaadinayo dowlada KMG ah ee iyadu ku fashilantay 100keedii maalmood oo ay aduunyada iyo shacabka Somaliyeed u sheegtay in ay wada hadal la gasho ururka Shabaab.
Dr. C/qaasim ayaa sheegay in shirkaas ay qabanqaabiyaan waxgarad Soomaali ah oo lagu kalsoon yahay laguna qabto gudaha dalka, isagoo sheegay inaysan Soomaaliya ku jiri karin dhibaato intaan kaddib.
"Soomaaliya waxay dhibaato kusoo jirtay muddo 20-sano ka badan oo ay isku badbadaleen mas'uuliyiin dhaqaale doon ah, waa in la qabto shir dib u heshiisiineed oo la isugu keenayo DKMG ah iyo Xarrakatul Shabaab oo uu u dhexeeyo dagaal," ayuu yiri C/qaasim. "Shirkaas aniga laftayda waan ka qaybgalayaa."
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegay in Soomaalida ay u taallo inay khilaafkooda xaliyaan oo aysan dibad ka sugin in khilaafkooda la xaliyo ama shirweyne dib u heshiisiineed loo qabto.
"Qof walba oo dambi ka galay Soomaaliya sharciga ayaa la horkeeni doonaa ciddii uu doono ha noqdee, xitaa aniga haddaan ku jiro waxaan ogolahay inaan sharciga hortago, waayo dhibaatada ka dhacday Soomaaliya waa mid la geystay," ayuu yiri C/qaasim.
Wuxuu sheegay in Soomaaliya ay soo mareen hogaamiyeyaal dano gaar ah wata, balse ay u baahan tahay inay hesho hogaamiye daacad ah, oo dalka iyo dadka ku haga jidka nabada iyo horumarka.
Ma ahan markii ugu horeysay ee uu madaxweyne Somaliyeed ka hadlo arimaha cakiran ee ka taagan dalka Somaliya dhawaantaan ayey aheyd markii sidoo kale uu hadal kulul ka jeediyey idaacadaha madaxweynahii hore ee Somaliya Cabdullaahi Yusuf Ahmed oo isagu dhaliilay qaabka uu u gudanayo howshiisa wakiilka qaramada midoobay. inkasta oo ay dalka haatan ka taliyaan dhalinyaro qurbo joog ah oo aan intooda badan qibrad u laheyn dhaqanka Somalida maanta hogaamiyaashii hore ee dalka soo maray waxiiba ka nool kaalin weyn ayey ka qaatan karaan.
Tusaale labada madaxweyne ee hada hadlay labaduba waxey qaxooti ku yahiin wadamo ay fowdo ka jirto TFGda waxey awoodi kartaa iney labadaasi madaxweyne iyo waxiiba ka nool hogaamiyaashii dalka soo maray hogaamiyaan shirarka dib u heshiisiinta iyagoo kaashanayo waxgaradka Somaliyeed iyaguna fududeeyaan qaabkii dadka Somaliyeed leyskugu keeni lahaa.
Waxey shacabka Somaliyeed aad ula yaaban yahiin sida Xukumada Farmaajo ugu mashquulsan tahay in waqtiga loo kordhiyo xitaa si loo helo kor kortan waxaa kooxahaan laga nadiifiyaa caasimada Somaliya kedibna mudo kordhin ayaa la raadiyaa, malaha Kacaankii Cagaarnaa ee mudada dheer dalka ka talin jiray ee xukunka iskaka dhagay jidkiisii ayuu doonayaa inuu shacabka ku qasbo.
Wadan ninkii madaxweynaha ka ahaa shacabka Somaliyeed dhib danbe kama bixi karaan yiri oo isku soo taagay doorashada soo socota halka sano ee ay raadineyso xukumada Farmaajo yaa sheegi kara?
Ugu danbeyn xukumada Farmaajo ma ka faa'ideysan doontaa fikradaha wax ku ool ka ah ee ka kala imaanayo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan hogaamiyaashii dalka soo maray, mise waxuu waqtiga ka dhamaan doonaa iyadoo arintu tahay Dawaco meeshii ay macmacaan ku aragto ayey macaluul ugu dhimataa?
Isha waxka Hiiraan State
· admin on April 25 2011 11:18:50 · 0 Comments · 1787 Reads ·
14,581,414 unique visits